”KHAYRKII MADOOBAA”: Mo Farah oo muujiyey inuusan u shallaayeeynin inaysan london isla iman mataankiisa Xasan (Qaybtii 2-aad) – Gool FM
”KHAYRKII MADOOBAA”: Mo Farah oo muujiyey inuusan u shallaayeeynin inaysan london isla iman mataankiisa Xasan (Qaybtii 2-aad)
(London) 27 Luulyo 2016 – Markii uu 8 jir ahaa, ayuu orodyahanku yimi London isagoo la socda waalidkii jeer ay kala go’een mataankiisa Xasan oo markaa ay ku adkayd inuu safro maaddaama uu aad u bukey. Waxay kala maqnaayeen hal toban-sanaale.
Farah ayaa yiri: “Maaddaama uu dagaal sokeeye holcayey qof kasti wuu qaxayey mana aqoonin meel uu joogo. Waxaa uun dib loo helay markii ay hooyo dib u laabatay.”
Yeelkeede, 33-jirkan ayaa arrintan kala go’a ah u arka ”KHAYRKII MADOOBAA” isagoo sheegay inuusan heerkan gaareen haddii uu lasoo kori lahaa mataankiisa isagoo leh: “Wax kastaahi sabab bay ku dhacaan. Micnase ma malaha inaad tagtada cayrsato.
“Balse ma ogi inaan guushan gaari lahaa haddii uu Xasan halkan ila joogi lahaa, maxaa yeelay had iyo jeer inaan wax qasno unbaannu isku dhiirri gelin jirney.
“Wuxuu ahaa nin foowdo badan oo wax buu dhihi lahaa deetana anigu difaaciisa ayaan isu soo taagi lahaa oo dagaal baan geli lahaa! Taasina way i jeedin lahayd.” buu kusoo koobay Mo Farah.
Halkan ka akhri warkii oo asli ah…
RASMI: Ciro Immobile oo Lazio ku biiray